Hery Rajaonarimampianina : Hivory miaraka amin’ny biraon’ny OIF -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Hivory miaraka amin’ny biraon’ny OIF
Manao fitsidihana any ivelany, na ny marimarina kokoa any Paris, Frantsa, ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao. Raha ny vaovao voaray mahakasika ity fitsidihan’ny Filohan’ny Repoblika ity, hanatrika ary hitarika ny fivoriana eo anivon’ny biraon’ny Organisation Internationale de la Francophonie na ny OIF ny tenany, mandritra ity faran’ny herinandro ity.
Anisany tombony lehibe ho an’i Madagasikara mantsy ny maha filohan’ny OIF ny Filoham-pirenena Malagasy, nanomboka ny nandraisantsika ny Fivoriana an-tampon’ ny Frankôfônia, ny taona 2016 teo.
Amin’ity fivorian’ny biraon’ny OIF any Paris, Frantsa, ity, manana ny hetahetany ny vahoaka malagasy ka ahafahan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mitondra izany hetaheta izany amin’ny dinika hifanaovana mandritra ny fivoriana. Tsy izay ihany anefa fa hitondra ny hevitry ny Malagasy eo anivon’ny Frankôfônia ihany koa ka ahafahana mampandroso eo anivon’ny OIF, sns.
Ankoatra izay, manana lanja goavana ho an’ny firenena ny maha filohan’ny OIF ny Filoham-pirenena malagasy satria mandrapahatapitry ny fe-potoam-pitantanany, afaka miady ho an’ny tombontsoan’i Madagasikara hatrany ary miady ny ho tombontsoan’ireo firenena frankôfôna aty Afrika sy ny Oseana Indianina ihany koa.
Hotaterina aminao an-gazety eto ihany ny vontoatin’ny dinika sy ny fivoriana natrehina sy notarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina eo anivon’ny biraon’ny OIF. Marihina fa anisan’ny olo-manan-kaja manatrika izany ny sekretera jeneralin’ny OIF, Michaëlle Jean.